Android လုံခြုံရေး - သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်တွေကိုဒီအချက်တွေနဲ့ကာကွယ်ပါ Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မတူညီသောလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်ပရိုဂရမ်များနှင့်အတူ၊ လုံခွုံရေး ပိုဆိုးလာသည်နှင့်အမျှ Android သည်သုံးစွဲသူများအားအမြင့်မားဆုံးသောလုံခြုံမှုကိုရှာဖွေရန်ရှင်းလင်းသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ တားဆီး ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များသည်ပလက်ဖောင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ရပ်များကိုလျှော့ချရန်ပိုမိုလုံခြုံမှုကိုပေးသည်။ အားနည်းချက် စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသောအကောင့်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးသောလုံခြုံရေးကိုပြသရန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအသုံးပြုသူများ
Android အတွက်တည်ရှိပြီးသင်၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးအချက်အလက် (အဆက်အသွယ်များ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်အခြားအရာများ) ကိုခိုးယူနိုင်သည့်အချက်အလက်ခိုးယူမှု၊ ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ် Trojans များကိုသင်စိတ်ပူပါက၊ သင်စုဆောင်းထားသောသတင်းများကိုစုဆောင်းထားပါသည်။ Android အတွက်တိုက်ခိုက်မှုများသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များ။
သင်၏ဖုန်းကို LokiBot malware မှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
ယခုလအနည်းငယ်အတွင်း LokiBot malware သည် Android အသုံးပြုသူများနှင့် ...
Ghimob malware အသစ်သည်ဘဏ်အက်ပ်များကိုပစ်မှတ်ထားသည်
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
၎င်းသည် Android နှင့်ဆက်စပ်သော Ghimob ဟုခေါ်သည့်နောက်ဆုံး malware မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။
por Miguel Gaton လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
သင်၏အိမ် (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ငွေစုဆောင်းခြင်းသာမက ...
por Miguel Gaton လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာနှင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်သတိပြုမိသလား။ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ သမိုင်း ...
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
အစပြုရန်၊ ယခုရေးသားချက်တွင် WhatsApp ကိုမည်သို့ထောက်လှမ်းရန်ရှင်းပြမည်ကို၎င်း၊ ၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသောပို့စ်ဖြစ်သည်။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
ကျွန်တော်တို့ဟာ Galaxy S4 နဲ့ S7 Edge ကိုစတင်ပြီး ၄ နှစ်လောက်အကြာမှာသူတို့ဟာ update တွေလက်ခံနေတုန်းပါပဲ။
ဂရုတစိုက် !! လမ်း လွဲ၍ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ရှိနေနိုင်သောသံသယဖြစ်ဖွယ် application များ
por Francisco Ruiz လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
ဒီနေ့ Androidsis မှာခင်ဗျားတို့သုံးလေ့ရှိတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့မတူတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုငါယူလာပေးတယ်၊ အဲဒါကမသွားဘူး ...
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
Android က Apple ကို iPhone နဲ့အတူပြိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့နောက်တစ်ခု။ ယခုတစ်ကြိမ်မှာ၎င်းသည်စာဝှက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
Play Store မှ malware?
por Francisco Ruiz လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
developer တစ်ယောက်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်မမှန်မကန်မှုများကိုဤအရပ်မှ Androidsis ကရှုတ်ချလိုက်သည်မှာတစ်ပါတ်အကြာ ၇ ရက်ကြာသည်။
ANDROID ALERT နှင့်အတူပြန်သွားသည်၊ သို့မဟုတ်အတူတူပင်၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း ...
malware များကိုတိုက်ဖျက်ရန် Google Play သည် ESET, Lookout နှင့် Zimperium တို့နှင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်
ဂူဂဲလ်ပလေးတွင် malware သည်သာမန်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်ထက်မကသော application များ ...
updates အချို့ကိုစစ်ဆေးရန် Android ၏အချို့သောအချက်များ
Samsung Galaxy J5 (2017) သည် BlueBorne နှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်မှုကိုရရှိသည်
2KB သာမက်ဆေ့ခ်ျသည် WhatsApp ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်
သင်၏ terminal ၏ IMEI ကိုအရန်ကူးရန်မည်သို့လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်မည်နည်း။